laser sixitaanka mishiinka Fiber
3D laser fiber sixitaanka mishiinka
2D Fiber mishiinka laser sixitaanka
Dayuurada Laser Machine Calaamadaynta
Class waxaan lasermarking mashiinka
Laser Chinese Machine Jarida
Germany IPG Laser Goynta Machine
CO2 Jarida Laser & Machine Engaving
CO2 Flying Laser Calaamadaynta Machine
Gavlo CO2 Laser Jarida * xardho Machine
UV Laser Calaamadaynta Machine
3D UV laser xardho MAKIINADDA
Laser Alxanka Machine
Laser Nadiifinta Machine
DIIRAD L Aasheerna is a China famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
waxyaabaha Our ka mid ah saddex nooc ugu weyn ee wax soo saarka yihiin laser fiber sixitaanka mishiinka, mashiinka sixitaanka laser CO2 iyo laser UV sixitaanka mishiinka. Iyada oo ku saleysan technology laser aynu u hormaray 3D mashiinka xardho fiber laser (mashiinka xardho Deep), Dynamic UV mashiinka xardho laser, mashiinka mashiinka engaving laser CO2 Dynamic, laser duulaya sixitaanka, mashiinka goynta fiber laser, mashiinka alxanka laser iyo wixii la mid ah.
In ka badan 20 taxane. Alaabta iyo adeegyada shakhsiga si ay u siiyaan macaamiisha faa'iido weyn. Sabab u ah tayada sare ee badeecada iyo qaab lagu kalsoonaan karo noo, ay si ballaaran loo isticmaalo qalabka korontada, qalabka, model-qaadashada, dharka, kabaha, advertising, daabacaadda iyo baakadaha, toy-qaadashada, iyo sidoo kale warshadaha dheeraad ah.
Adag Q uality waxaan nspection For Machine
Si loo hubiyo tayada iyo xasiloonida of mishiinka, DIIRAD laser oo isticmaalaya qalabka wax soo saarka iyo baaritaan ugu horumarsan, oo ay ku jiraan laser meter kaas oo ka soo USA, CNC mashiinada shiidi doona, muraayad iskaanka, AC danab variable emulator awood deggan laga keeno, nidaamka diirada.
Oo aan u isticmaalno qolka a darmuus qiyaaseed, qalab lagu qiyaaso 3D, dynamometers laser, buundada digital, iyo qalab horumarsan si loo hubiyo tayada iyo waxqabadka of our qalabka laser warshadaha in talaabo wax soo saarka kasta si loo hubiyo in tayada our mashiinka iyo qaab deggan.
Qiimaha C ontrol
FOCUSLASER bixisaa la awoodi karo, mashiinka oo tayo sare leh. Iyadoo faa'iidooyinka Shiinaha, lacagta buuxda marka la eego tayada iyo qiimaha, soo iibsiga ee qaybaha muhiimka ah ee Germany iyo Maraykanka, Japan, Taiwan iyo assemblying iyo wax soo saarka ee Shiinaha. FOCUSLASER leeyihiin sahayda-silsilad-habka ugu wanaagsan ee qaybaha iyo qaybaha, iyo rikoor adag oo tayo iyo hal-abuurnimo, si ay u caddeeyaan in 10-sano waxqabadka ee mashiinka.
FOCUSLASER isu keentaa tayo xirfadeed iyo technology, waxay leedahay shaqaale xirfad tacliin heer sare. Laga soo bilaabo horumarinta software in design hardware, baaritaanka nidaamka, adeegyada farsamo ay dhammaystirmaan shaqaale xirfad iyo farsamo.
R & D Kartida
FOCUSLASER ayaa helay 23 hardware iyo software shatiyada duurka teknoolojiyad sare. Waxaan leenahay soctay R & D dheer iyo waayo-aragnimo badan oo duurka ku laser oo aynu nahay "Hi-Tech Enterprises" ee Shiinaha.
meesha juquraafi Focus Laser waxay bixiyaan fursado badan si loo yareeyo kharashka soo saarka, oon hoos u dhaca qiimaha our. Xarunta FOCUSLASER waxa uu ku yaalaa ee Guangzhou sidoo kale loo yaqaan Canton ku saabsan 120 km (75 mi) waqooyi-galbeed ee Hong Kong oo 145 km (90 mi) xagga woqooyi ka xigta Macau, Guangzhou leedahay taariikh ka badan 2,200 oo sano oo ahaa terminus weyn oo badda ah Silk Road oo ku sii socda si ay ugu adeegaan sida xarun weyn dekedda iyo gaadiidka maanta, iyo sidoo kale mid ka mid ah saddex magaalo ee ugu waaweyn dalka Shiinaha. Halkaas oo aanu u leeyihiin habka ugu wanaagsan ee wax soo saarka ku habboon si fudud loo soo bandhigay kartaa qalabka ugu horumarsan technology iyo wax soo saarka, talanti, iyo isticmaalka noocyo kala duwan oo gaadiidka badda iyo hawada, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay bixiyaan qalabka laser oo tayo sare leh oo la awoodi karo qiimaha.
waxqabadka alaabta Tayada iyo sumcad wanaagsan, waxyaabaha FOCUSLASER ma aha oo kaliya iibiyay guulaha Shiinaha, laakiin sidoo kale ayaa loo dhoofiyay in ka badan 90 dal iyo gobol ee adduunka, oo ay ku jiraan: Germany, USA, Italy, Russia, Japan, South Korea, Turkey, Brazil, India, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya iyo waddamada kale, waxyaabaha ku xiran yihiin soo dhaweyn weyn iyo ammaan. Waxaan had iyo jeer mahad trust macaamiisha iyo taageerada FOCUSLASER.
Inuu bixiyo mashiinada ugu wanaagsan, qiimo ugu fiican, iyo waxay bixisaa adeeg-ka dib iibka ku qanacsan in ay macaamiisha.
Wixii macluumaad faahfaahsan oo dheeraad ah oo ku saabsan mishiinada laser our, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriir